वैंकहरुले संकलित निक्षेपभन्दा ३ गुणा वढी कर्जा प्रवाह गरे
कर्पोरेट नेपाल , २ मंसिर २०७५, आईतवार, ०७:२१ pm
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा संकलित निक्षेपको तीन गुणा बढी ऋण लगानी गरेका छन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार असोज मसान्तसम्म निक्षेपभन्दा कर्जा २. ७३ गुणाले बढेको हो ।
आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै बैंकहरुले २. ९१ प्रतिशतले निक्षेप वृद्धि गरेका हुन् । सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले बाहेक अन्य २७ वटा बैंकहरुले असोज मसान्तसम्म २३ खर्ब ६७ अर्ब १४ करोड निक्षेप संकलन गरेको थियो । यस अघि असार मसान्तसम्म २३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो । असार मसान्तसम्म १९ खर्ब ८३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरुले असोज मसान्तसम्म २१ खर्ब ४१ अर्ब २७ करोड पुर्याएका छन् ।
तर विज्ञहरुले भने संकलित निक्षेपभन्दा वढि कर्जा प्रवाह बढाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आएको वताएका छन् । फलस्वरुप एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप नथपिएसम्म कर्जा दिन नसक्ने भएका छन् । १४ वटा बैंकहरुको निक्षेपमा कर्जा अनुपात ७८ प्रतिशतले नाघेको छ । यसअघि कुनै पनि बैंकहरुको कर्जा अनुपात ७८ प्रतिशत पुगेको थिएन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार बैंकहरुले कर्जा बढाउने तर्फ मात्रै ध्यान दिँदा, गलत ठाउँमा पुँजी लगानी भई समस्या देखिने सम्भावना वढेको छ । यसले आयातित बस्तु तथा सेवा, र मुद्रास्फिति जस्ता पक्षलाई पार्ने असरले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पर्दछ । त्यसैले यसतर्फ बैंकहरु सजग हुनुपर्ने तर्क छ, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापाको ।
त्यसो त बैंकहरु पनि प्रयाप्त लगानी रकम नभएकाले कर्जा अनुपात हटाउनुपर्ने माग राख्दै अर्थमन्त्रालयमा दवाव दिएका छन् । ‘राज्यले समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने भएकाले त्यसको असर बैंकको निक्षेपमा पर्न जाने र उद्योग व्यवसायहरु संकटमा पर्न सक्ने भएकाले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने एक वैंकरले वताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले भने यो अनुपात हटाउन नसक्ने पक्षमा उभिएको छ । ‘बैंकहरुको लक्ष्य भनेकै अधिक्तम नाफा कमाउनु हो, त्यसकारण उनीहरुले यो अनुपात हटाउन खोजेका हुन् त्यसले जोखिम बढाउँन सक्छ’ थापाको भनाई छ । सर्वसाधारणबाट संकलित रकम उपयुक्त ठाउँमा लगानी गरी अर्थतन्त्रलाई सहयोग पु¥याउन पर्नेमा उनको जोड छ ।
त्यसो त सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको कर्जा अनुपात नीजि क्षेत्रका वैंकहरुको भन्दा कम छ । यसरी हेर्दा नेपाल बैंकको कर्जा अनुपात ७१ प्रतिसत रहेको छ भने, कृषि विकास बैंकको ७५ प्रतिशत छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको असारसम्मको कर्जा अनुपात ७१ प्रतिसत छ ।
असोज मसान्तसम्म विभिन्न वैंकहरुको कर्जा अनुपातलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
सिडी रेसियो प्रतिशतमा
बैंकिङ क्षेत्रको सुनचाँदीमा ३४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढि लगानी
अर्थतन्त्रको आकार भन्दा धेरै बैंकहरुको निक्षेप